खेलाडीको तिहार- खेलकुद - कान्तिपुर समाचार
कार्तिक ४, २०७४ सुवास हुमागाईं
काठमाडौं — गत वर्ष सारा नेपाल लक्ष्मी पुजामा व्यस्त हुँदा नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोली भने विमानस्थलमा मलेसिया प्रस्थान गर्ने तयारीमा थियो । एएफसी सोलिडारिटी कपमा सहभागी हुन नेपाली टोली त्यसतर्फ लागेको थियो । चाडबाडको मुखैमा विदेशिनु पर्दा खेलाडीको मुहारमा केहि नैराश्यता प्रष्ट देखिन्थ्यो ।
घर–परिवारलाई छाडेर देशको प्रतिनिधित्व गर्दै खेल्न जानु खेलाडीको लागि नौलो थिएन। चाडबाडको समय भएकाले भने खेलाडीहरु केही खिन्न थिए ।
टोली मलेसिया पुगेको भोलिपल्ट भाइटिका थियो । मलेसिया पुगेका ३२ सदस्यीय नेपाली टोलीको निधार खालि नहोस भनेर टोलीका गोलरक्षक विशाल श्रेष्ठकी दिदि विद्याले नेपाल जानुअघि योजना बनाइसकेकी रहिछन् । टोली नेपालमा छँदै उनले उपकप्तान विराज महर्जनको हातमा टिका सामाग्रीसँगै कोसेली पनि मलेसियानै पठाइन्, यो कुरा विशाललाई भने पत्तो थिएन । टिकाको दिन टोलीका सम्पूर्ण सदस्य नियमित कार्यतालिका अनुसार ब्रेकफास्टमा सरिक हुन् पुगे । त्यस समय विशालको टेबलमा कोसेलीको पोको रखिएको थियो । विशाल त्यो देखेर अन्यौलमा परे । जब विराजले उनलाई दिदीले नेपालदेखि भाइटिकाको कोसेली पठाएको खुलासा गरे, विशाल भावुक भए ।
ब्रेकफास्टपछि टोलीका सम्पूर्ण सदस्य एकै कोठामा भेला भए । त्यो भिडमा टोलीका महत्त्वपूर्ण सदस्य मध्यका एक विमल घर्तीमगर भने थिएनन् । बहिनीको निधनका कारण उनको निधार खाली रहने हुनाले उनी त्यो दिन निकै ढिला उठे । विमल निन्द्रामै छँदा यता नेपाली टोलीका अन्य सदस्य टिका लगाउँदै थिए । विशालसँगै रन्जन विष्ट, विकेश कुथु र विराज महर्जनले सम्पूर्ण सहकर्मीलाई टिका लगाईदिए । टोलीका प्रशिक्षक राजु काजी शाक्य सहित अन्य पदाधिकारी पनि त्यसमा सरिक भए ।
टिकाटालो सकिएपछि फोटो खिच्दा सबैजना हसिँलो मुद्रामा थिए । नेपाल छाड्दा विमानस्थलमा देखिएको उदाशीपन उडिसकेको थियो । मलेसियाको मुस्कानले यता नेपालमा विशालकी दिदि विद्या पनि गदगद भइन् । विद्याले त्यस बेलाको अवस्थाको बेलिबिस्तार लगाइन् । ‘विशाल एन्फा एकेडेमीमा छँदा देखिनै तिहार कहिल्यै छुटेको थिएन । दशैं भने एकदुई पटक खेलका कारण मनाउन पाएको थिएन । तिहार मनाउन नपाउँदा मन खिन्न भएको थियो । तर मैले विराजसँग कुरा गरेर उतै केहि गर्न सकिन्छ कि भन्ने योजना बनाएँ ।’
‘टिकाको दिन बिहानै फेसबुकमा भाइहरुले फोटो र भिडियो हालेको देख्दा एकदम खुसी लाग्यो । विशालसँगै अन्य खेलाडीले पनि टिका लगाएको देख्दा यहाँ भन्दा रमाइलो भयो,’ उनले सुनाइन् ।
विशाल आफैं पनि निकै खुसी देखिन्थे । ‘त्यसबेला तिहार मनाउन पाइन्छ भन्ने एक मनले पनि सोचेको थिएन । निकै खुसी लाग्यो । मसँगै अन्य साथीहरुले पनि सँगै टिका लगाइयो, तिहार मिस भएन,’ उनले भने ।
यसपटक विशाल नेपालमै छन् र दिदि विद्या सपरिवार तिहार मनाउने सुरमा छन् । ‘यसपटक विगत जस्तै तिहार हुन्छ । चाडबाडमा हाम्रो परिवारका सम्पूर्ण सदस्य एकै ठाउँमा भेला हुन्छौं । विशालसँगै दिदि बिना र पार्वती पनि आउनुहुन्छ ।’
‘पछिल्लो वर्ष विशाल नभए पनि मलेसियाको खुसीले तिहार विशेष रहयो । यसपटक पनि योजना बुन्दै छु, हेरौं के हुन्छ’
विद्याजस्तै नेपाली तेक्वान्दोकी दिग्गज संगीना वैद्यपनि तिहारको पर्खाइमा छिन् । अन्य चाडभन्दा संगीनालाई तिहारको व्यग्र प्रतिक्षा रहने गर्दछ । संगीनाको परिवारमा एक भाई र उनिसमेत सात दिदिबहिनी छन् । भाइटिका उनको परिवारमा यस्तो अवसर हो जहाँ परिवारका सबै एकै स्थानमा भेला हुन्छन् ।
सक्रिय खेल जीवनका क्रममा उनले कतिपटक तिहार मनाउनै पाइनन् । ‘खेलाडी भएको बेलामा विदेशमा खेल्न जाँदा तिहार मनाउन नपाउँदा निकै नरमाइलो लाग्थ्यो । तर अहिले सबै सँगै रहेर तिहार मनाउँछौं ।,’ उनले भनिन् । खेल जीवनबाट संन्यास लिएपनि संगीना हाल तेक्वान्दो प्रशिक्षकका छिन् । गत वर्ष रियो ओलम्पिकमा उनी तेक्वान्दो खेलाडी निशा रावलकी प्रशिक्षक थिइन् । दिदिबहिनी मध्यकी पाँचौ उनले भाइलाई के कोसेली दिने भन्ने अझै टुंगो लगाएकी छैनन् ।
त्रिशुलीमा घर भएर विगतमा त्यहाँ टिका लगाउने गरेको उनको परिवार अहिले काठमाडौंमा छ । यसपटक काठमाडौंमा तिहार मनाउने उनले उपत्यकाका विभिन्न मठ–मन्दिर जाने बताइन । ’सबै सँगै हुने कारण यतै नजिक घुम्न जाने योजना छ । यसरी आफ्नो मान्छेसँगै रमाइलो गर्दा जतिको मजा सायदै अरु होला । परिवारमा सबै एकै ठाउँमा जम्मा हुँदा छुट्टै उल्लास हुन्छ, ’ उनले भनिन् ।
प्रकाशित : कार्तिक ४, २०७४ १७:३७
३ करोड फिरौती असुल्न भारतीय ब्यापारीको अपहरण
अपहरणमुक्त गराइए भारतीय ब्यापारी,२ थान कटुवा पेस्तोलसहित संलग्न ३ पक्राउ
कार्तिक ४, २०७४ अवधेशकुमार झा
राजविराज — गत असोज २९ गते सप्तरीको कञ्चनरुप नगरपालिकाबाट अपहरणमा परेका भारतीय कपडा ब्यापारी अमित शारदालाई सप्तरी प्रहरीले शुक्रवार राति अपहरणकारीको कब्जावाट सकुशल मुक्त गराएका छन् ।
सप्तरीको कञ्चनरुप नगरपालिका १२ सितापुरवाट ब्यापारी शारदालाई अपहरणकारीको कब्जावाट सकुशल मुक्त गराइएको सप्तरीका प्रहरी प्रमुख एसपी मुकेशकुमार सिंहले जानकारी दिए । अपहरणकारीले ब्यापारी शारदालाई राखेको स्थानको वारेमा गोप्य सुचना आएपछि प्रहरीले उनलाई राखिएको स्थानलाई घेरा हालेपछि अपहरणकारीको कब्जावाट उनलाई मुक्त गराउन प्रहरी सफल भएको हो । अपहरणकारीहरुले ब्यापारी शारदालाई कंचनरुप नगरपालिका १२ स्थित अम्बरबहादुर मगरको घरमा बन्धक वनाएर राखेका थिए । सोही घरलाई घेराहाली प्रहरीले उनलाई मुक्त गराएको हो ।
ब्यापारी शारदालाई अपहरणमुक्त गराउने क्रममा प्रहरीले संलग्न ३ जनालाई २ थान नलकटुवा पेस्तोल सहित नियन्त्रणमा लिएको एसपी सिंहले जानकारी दिए । अपहरणका सल्गन भएको आरोपमा प्रहरीले कंचनरुप ४ का अमरनाथ विश्वास, वडा नम्बर ७ का पशुपति भनिने पुस्कर महतो तथा वडा नम्बर ६ का शैलेन्द्रकुमार गुप्तालाई नियन्त्रणमा लिइएको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीमा शनिबार साँझ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनीहरुलाई सार्वजनिक गरियो । सोही पत्रकार सम्मेलनमा अपहरणमुक्त भएका ब्यापारी शारदालाई समेत उनको परिवारको जिम्मा लगाईयो । प्रहरीले ब्यापारी अपहरणमा प्रयोग गरिएको डिएल थ्री सि एए ८८५६ नम्बरको भारतीय नम्बर प्लेटको सेन्ट्रो कार समेत नियन्त्रणमा लिएको छ ।
ब्यापारी शारदाको अपहरण फिरौती असुलीकै लागि गरिएको प्रारम्भिक अनुसन्धानवाट देखिएको एसपी सिंहले जनाए । ३ करोड फिरौती माग गर्ने र आएको रकम आफुहरुले बाडफाड गर्ने योजना अपहरणकारीहरुको रहेको प्रहरी अनुसन्धानवाट खुलेको छ । अपहरणमुत्त: भएका ब्यापारी शारदाले आफू रकम असुली गरि भारतीय बजार भिमनगर तर्फ फर्किने तयारीमा रहेका बेला कञ्चनपुरको हटिया नजिक जवरजस्ती भारतीय कारमा हालेर बेपतत्ता बनाएको र पछि अपहरणमा परेको थाहा पाएको सुनाए ।
सुनसरीसित सिमा जोडिएको भिमनगर वजारमा कपडाको ब्यापार गर्दे आएका भारतीय ब्यापारी ३३ वर्षिय अमित शारदाको अपहरण भएको थियो । शारदाका दाजु जुगलकिसोर शारदाले जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीमा जाहेरी दर्ता गराउदै आफना भाई गत असोज २९ गतेदेखी नै फेला पर्न नसकेको बताएपछि उनको खोजीमा सप्तरी प्रहरी जुटेको थियो ।
सिमावर्ती वजार भिमनगरमा कपडाको ब्यापार गर्दै आएका अमितको कारोवार नेपाली ब्यापारीहरुसित पनि थियो । सोही क्रममा असोज २९ गते रकम असुलीका लागि उनी मारुतीमा सवार भई सप्तरीको कंचनपुर आएका थिए । असुलीका लागि कंचनपुर आएका उनी घर नफिर्कएपछि परिवारले अपहरण भएको अनुमान गरेका थिए ।
थप केही खेलकुदबाट
डीपीएल अक्सन [प्रत्यक्ष अपडेट]
विनोद पाण्डे, सुबास हुमागाईं
डीपीएल अक्सन आज
लोगोमा सातै प्रदेशको झल्को
थ्रीस्टारलाई संकटाको झट्का
हाउन्ड्सको लगातार हार
सुदूरपश्चिम र पश्चिमाञ्चल भिड्ने
वाम एकता : के होला बहुदलीय जनवाद र माओवाद ?
गंगा बीसी फाल्गुन ९, २०७४
एमाले–माओवादीबीचको ‘एकीकरणका प्रारम्भिक आधारहरु’ मा सहमति भएसँगै एकताको ठोस आधार तय भएको छ । खासगरी दुबैले साझा मार्गदर्शक सिद्धान्त ‘मार्क्सवाद लेनिनवाद’ मानेका छन् । एमालेको...
अंग्रेजीले सुधार्दैन शिक्षाको गुणस्तर
रामजी पौडेल फाल्गुन ९, २०७४
यदि कसैले देश विकास र संवृद्धिको सपना देख्छ भने उक्त देशको नेतृत्वकर्ताको ध्यान सर्वप्रथम शिक्षा क्षेत्रमा जानु जरुरी हुन्छ । शिक्षा नै विकासको मेरुदण्ड हो...
के लोकतन्त्र टिक्ला ?
लोकराज बराल फाल्गुन ९, २०७४
लोकतन्त्रको समस्या र सम्भावनाका विषयमा आज विश्वभर चर्चा चल्न थालेको छ । विकसित र स्थायी मानिएका कतिपय देशका लोकतन्त्र यस बहसमा अपवाद छैनन् ।
सैद्धान्तिक संकटमा वाम गठबन्धन
युग पाठक फाल्गुन ९, २०७४
चुनाव जित्नासाथ एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली दलबलसहित रसुवागढी नाका पुगेका थिए । त्यो हेलिकप्टर सयरमा देखिएको ओलीको राजनीतिक भावभंगिमाले दुइटा अर्थ बोकेको थियो । एक, प्रधानमन्त्रीको...
वाम एकताको अर्थ
सम्पादकीय फाल्गुन ९, २०७४
फरक धारका राजनीतिक अभ्यासबाट उदाएका नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले अनेक आशंका–अन्योल चिर्दै अन्तत: पार्टी एकता सुनिश्चित गरेका छन् । पार्टी एकता अभियान घोषणापछिको करिब पाँचमहिने...
एआईजी व्यवस्थापनको मुसेदौड
जनकराज सापकोटा फाल्गुन ९, २०७४
संघीय राज्यका सुरक्षा निकायको संगठनात्मक संरचना कस्तो हुने ? त्यसको कार्यसम्पादनलाई कसरी चुस्त र थप विकेन्द्रित बनाउने ? यस्ता महत्त्वपूर्ण प्रश्नमाथि न सुरक्षा निकायभित्र नत राजनीतिक तहमा...
झमक घिमिरे फाल्गुन ९, २०७४
सन्दर्भ यही साताको छ । प्रत्येक वर्ष फागुन ७ गते नेपालमा भव्यतापूर्वक प्रजातन्त्र दिवस मनाइन्छ । यसपालि पनि औपचारिक रूपमा प्रजातन्त्र दिवस धुमधामसँग मनाइयो ।
अलमलमै नेपालका मातृभाषा
गणेश राई फाल्गुन ९, २०७४
देहात बस्ती र गाउँघरका सबै खाले मातृभाषी समुदायका अभिभावक छोराछोरी बोर्डिङ स्कुल पढाउन नगर र सहरतिर झरेको निकै वर्ष भइसकेको छ । प्रजातन्त्र उदयसँगै नागर सभ्यता...
नयाँ सरकारका जोखिम
टीकाराम भट्टराई फाल्गुन ८, २०७४
सबै विषय अपेक्षित ढंगले अघि बढे अधिकतम ५ वर्ष र अनपेक्षित गराइयो भने पनि न्यूनतम २ वर्षका लागि सरकारको स्थायित्वमा अब प्रश्न गर्ने ठाउँ छैन ।...
भ्रष्टाचारविरुद्ध नागरिक शक्ति
अलाइना बी. टेपलेट्ज फाल्गुन ८, २०७४
केही महिनादेखि भ्रष्टाचार बढ्दो रूपमा सार्वजनिक संवादको विषय बन्दै आइरहेको छ । यो प्रशंसनीय कुरा हो । किनभने लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा नागरिकले सार्वजनिक चिन्ताका मुद्दालाई सम्बोधन गर्नैपर्छ । भ्रष्टाचार...